Amaplanethi anezindandatho: izici namasu okufuna ukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphakathi uhlelo lwelanga senze ukuhlukaniswa okuhlukahlukene ukukhetha amaplanethi anezici ezifanayo. Sifikile amaplanethi angaphakathi futhi nge Amaplanethi angaphandle. Kulokhu, sizohlukanisa ukuthi yiziphi izindlela ze- amaplanethi anezindandatho nezici zayo eziyinhloko. Kunezinhlobonhlobo zezinhlobo zamaplanethi kanti ezinye zithakazelisa kakhulu ngokubuka ngobuhle, njengamaplanethi anezindandatho. Kunabantu abaningi namanje abangabazi ubukhona balezi zindandatho nokuthi zakhiwe ngani.
Ngakho-ke, kule ndatshana sizokhuluma ngamaphi amaplanethi anezindandatho kanye nezici zawo eziyinhloko.
1 Amaplanethi anezindandatho zesistimu yelanga
2 Ukwakhiwa kwamaplanethi anezindandatho
3 Amasongo kaSaturn
Amaplanethi anezindandatho zesistimu yelanga
Njengoba sazi, kunezinhlobo ezahlukahlukene zamaplanethi ngokwe-morphology yawo, izici zawo nendawo yawo maqondana nelanga. Yize izindandatho zeplanethi iSaturn zaziwa kakhulu kunazo zonke, empeleni, wonke amaplanethi anegesi ohlelweni lwonozungezilanga anohlelo lwendandatho. La maplanethi anegesi abizwa nangokuthi amaplanethi angaphandle kwazise aqhelelene nelanga. Siyazi ukuthi kukhona ama-4 ala maplanethi futhi onke anezindandatho. Ake sihlaziye ukuthi ziyini kanye nezici zazo:
I-Jupiter: inohlelo lwendandatho oluntofontofo olungabonakali ngeso lenyama. Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi noma nini lapho kubonakala iJupiter ezithombeni kahle, izithombe aziboniswa ngohlelo lwendandatho. Uma usebenzisa isibonakude esijwayelekile ngeke ukwazi ukubona uhlelo lwezindandatho njengoba lincane impela. Kutholwe ngo-1979 ngenkathi i-Voyager 1 space probe ikwazi ukuthola lezi zindandatho.
ISaturn: Kuyiplanethi ene-quintessential ringed yesistimu yelanga. Futhi ukuthi inemibala egqamile futhi yakhiwe ngezinto ezinkulu kakhulu futhi eziyinkimbinkimbi. Izindawo ezahlukahlukene zangaphakathi nezinhlelo zingatholakala ngaphakathi kohlelo lwezindandatho. Iningi lazo lakhiwe ngothuli nezinhlayiya zeqhwa ezizungeza iplanethi. Uma ubonwa ukude lezi zinto zibonakala sengathi ziyinto eyodwa futhi bezihlangene phakathi kwazo.
I-Uranus: yiplanethi enesistimu yezindandatho. Inesistimu yokubukisa engaphansi kukaSaturn kepha inkulu kuneyeJupiter. Lesi ngesinye sezizathu esenza u-Uranus amelwe ngamasongo. Inesistimu ephelele eyenziwe ngamasongo ayi-13 achazwe kahle. Uma sibheka le planethi ngesibonakude, singabona izinhlayiya ezisukela osayizi abancane kakhulu kuye emadwaleni angafika kubude bemitha elilodwa ngosayizi. Zonke lezi zinhlayiya ziyantanta zizungeze iplanethi.
I-Neptune: Kungokugcina kwamaplanethi kuhlelo lwonozungezilanga futhi inohlelo lwendandatho. Ifana kakhulu naleyo yeJupiter ngoba kunzima kakhulu ukuyikhomba ngenxa yobuncane bayo. Ayikwazi ukutholwa ngaphandle kosizo lwezinto ezikhethekile namateleskopu anamandla anele. Lolu hlelo lwendandatho lwenziwe ngama-silicates, iqhwa namanye amakhompiyutha wemvelo njengomphumela wesenzo se-magnetosphere yomhlaba.
Ukwakhiwa kwamaplanethi anezindandatho
Uma sesihlaziyile ukuthi yimaphi amaplanethi anezindandatho zesistimu yelanga, sizozihlukanisa. Siyazi ukuthi amaplanethi wesistimu elanga angahlukaniswa ngamaqembu amabili amakhulu: ngakolunye uhlangothi, sine- amaplanethi anamatshe futhi ngakolunye uhlangothi sinamaplanethi anegesi. Ukwakheka kwamaqembu womabili kuhluke ngokuphelele. Kodwa-ke, lesi sigaba sisiza ukukwazi ukuhlukanisa amaplanethi ngokobukhulu nangombuso omkhulu wesisindo sawo.
Singathola amaplanethi anamadwala ikakhulukazi akhiwe ngumzimba oqinile owakhiwe ngamatshe azungezwe umoya onegesi. Lawa maplanethi nawo, nawo, amaplanethi amancane kakhulu azungeza eduze nelanga. Lawa maplanethi yi: Mercury, Venus, Earth kanye neMars.
Ngakolunye uhlangothi, sinamaplanethi aziwa ngegama lamagesi amakhulu. La maplanethi futhi yilawo anohlelo lwawo lwezindandatho. Zitholakala engxenyeni engaphandle yesistimu yelanga futhi, ngakho-ke, zibizwa nangokuthi amaplanethi angaphandle. Atholakala ngale kwebhande le-asteroid futhi isici sazo esiyinhloko ukuthi awanawo umnyombo oqinile ochazwe kahle. Iningi lomhlaba wonke lisesimweni segesi. Zakha inqwaba yegesi eyakha ingxenye enkulu yomhlaba. Lawa maplanethi yi: Jupiter, Saturn, Uranus neNeptune.
Njengoba iSaturn iyiplanethi eyaziwa kahle kakhulu ngokuba nesistimu yezindandatho, sizoyihlaziya ngokujulile. Imayelana neplanethi yesistimu yelanga enamasongo achazwe kahle futhi okulula ukuwabona wonke. Kumele kukhunjulwe ukuthi amasongo awawona amayunithi ngokwawo kepha angumphumela wokukhanya obangelwa ukubekwa kwezigidi zezinhlayiya zothuli, zamatshe nezamaqhwa. Umuzwa wokuthi lezi zinto zihlangene zenza iringi engaguquki futhi eqhubekayo unikezwa yi-orbit. Futhi ukuthi lezi zinto zizungeza ngokuqhubekayo ngenxa yesenzo samandla adonsela phansi kaSaturn.
Ngokuya ngobukhulu, i-morphology nesisindo sento ngayinye siyabona ukuthi zizungeza ngejubane elihlukile. Zonke izinto zingahlukaniswa zodwa, inqobo nje uma ubuchwepheshe obufanele busetshenziselwa yona. Izinto eziningi ezizungeze iSaturn zikhonjwe ngamagama ahlukile. Siyazi ukuthi iplanethi Inamasongo ayi-6 esewonke futhi ngayinye yazo ibizwa ngamagama u-A, B, C, D, E no-F. Okubaluleke kakhulu okubili kokuqala futhi kwehlukaniswa yilokho okwaziwa ngokuthi isigaba seCassini. Isifunda esaziwa njengendandatho engenalutho yiso esihlukanisa izindandatho ezimbili eziyinhloko.
Yize ezithombeni esivame ukuzibona ezincwadini nakumadokhumentari, i-Uranus ayinikezwa amasongo, inesistimu yayo eyenziwe ngamasongo ayi-13 esewonke. Kwenzeka njengakuJupiter. Luhlelo lwendandatho oluncane futhi luncane kangangokuba alunakubonwa ngamehlo enyama.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamaplanethi anezinsimbi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Amaplanethi anezindandatho